Isma dhaanto la is dhaafsanayo…!!! – Gool FM
Isma dhaanto la is dhaafsanayo…!!!
Byare December 25, 2018
(Europe) 25 Dis 2018. Chelsea iyo AC Milan ayaa la warinayaa inay gaareen heshiis isdhaafsi ah kaa oo lagu kala badelanayo labada weeraryahan ee Alvaro Morata iyo Gonzalo Higuain marka uu dib u furmo suuqa kala iibsiga bisha Janaayo.
Labada dhaliye ayaa ku jira qaab ciyaareed liita, Morata xitaa laguma soo darin shaxda Chelsea ee saddexdii kulan ee ugu dambeeyay halka Higuain uu isna sooman yahay tan iyo bishii October oo wax gool ah ma dhalin.
Sida uu warinayo Sport Mediaset, labada kooxood ayaa dhammeystiraya qeybaha dambe ee heshiiska kala badelashada kaa oo lagu sheegay mid lama huraan ah.
Yeelkeede nuuca heshiiska weli lama go’aamin, ma Amaah ahaan baa la isku dhaafsanayaa mise si joogta ah.
Farsamo ahaan, Higuain wuxuu weli amaah ku joogaa San Siro oo wuxuu ka yimid Juvenus, sidaa darteed waa qasab in kooxda xafidaneysa Serie A ee Juve ay iyadu bixiso ogolaanshaha inuu dhoco heshiiskan, laakiin maamulka kooxda waxay aaminsan yihiin in labada kulan ee soo socota ee Frosinone iyo SPAL ay noqon doonaan kulamadii ugu dambeeyay uu ka soo muuqdo Milan.
Waxaa jira labo dooq oo miiska saaran, midka hore waa in la tir-tiro oo la soo afjaro heshiiska uu Higuain ku joogo Milan iyadoona taa badelkeeda uu amaah ku tagaya gegada Stamford Bridge, halka uu Morata isna u weecanayo dhanka kale heshiis amaah ah oo 18-bilood.
Dooqa labaad waa in labada weeraryahan la isku dhaafsado heshiis amaah ah oo 6-bilood ah, iyadoo uu Higuain dib ugu laabanyo Milan xagaaga soo socda.
Sikastaba, Higuain ayaa iminka u muuqda inuu dib ula midoobi doono tababarihiisa Sarri oo ay beri ka soo wada shaqeeyeen Napoli.
Cristiano Ronaldo oo keydka la dhigi doono kulanka barri galab ee Atalanta
Fernandinho oo WACAD ku maray inuusan Mardambe u ciyaari doonin Xulka Brazil.....(SABAB YAAB LEH oo ka dambeysa)